မိုက်ပန့်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မိုက်ကယ် ရစ်ချဒ် ပန့်စ် (အင်္ဂလိပ်: Michael Richard Pence) သည် အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်၍ ၂၀၁၇ မှစ၍ ၄၈ ဦးမြောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယသမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၇ အထ် အင်ဒီယာနာပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ မှ ၂၀၁၃ ကာလအတွင် အမေရိကန် အောက်လွှန်တော် အမတ်အဖြစ် ၁၂ နှစ်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပွဲဝင်ပုံစံဖြင့် မိုက်ပန့်စ် (၂၀၁၇)
၄၈ ဦးမြောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဒုတိယသမ္မတ
၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀ – ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀
အိမ်ဖြူတော် ကိုရိုဗိုင်းရပ်စ် အထူးတာဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆
အင်ဒီယာနာ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၅၀ဦး မြောက်)
၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ ၁၄ – ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၉
ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ ညီလာခံ သဘာပတိ
၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ ၃ – ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ ၃
၂၀၀၁ ဇန်နဝါရီ ၃ – ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ ၃
Indiana's 2nd congressional district (2001–2003)
Indiana's 6th congressional district (2003–2013)
(1959-06-07) ဇွန် ၇၊ ၁၉၅၉ (အသက် ၆၂)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယာနာ၊ ကိုလံဘတ်စ် (ကလမ်းဘာ့စ်)
ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ (၁၉၈၃- လက်ရှိ)
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၁၉၈၃ မတိုင်မီ)
Greg Pence (ညီအကို)
ဒုတိယသမ္မတ စံအိမ် (Number One Observatory Circle
အင်ဒီယာနာပါလစ်မြို့၊ အင်ဒီယာနာတက္ကသိုလ် (JD)
အင်ဒီယာနာပြည်နယ် ကိုလံဘတ်မြို့တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့၍ ဟန်းနိုဗာကောလိပ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ လွှန်တော်အတွင်း ၁၉၈၈-၉၀ တွင် ဝင်ရောက်ရန် မအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၄-၉၉ ၌ ကွန်ဆာဗေးတစ် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ရုပ်သံအစီစဉ်မှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၏ ဒုတိယ မဲဆန္ဒနယ်ကို က်ုယ်စားပြုကာ ၂၀၀၀ တွင် လွှန်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရလေသည်။ ၂၀၀၁ မှ ၂၀၁၃ အထိ ယင်းပြည်နယ်၏ ဆဋ္ဌမမောက် မဲဆန္ဒနယ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အောက်လွှတ်တော်တွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ /၀၀၉ မှ ၂၀၁၁ အတွင်း ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ ညီလာခံ၏ သဘာပတိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ပန့်စ်က မိမိကိုယ်ကို "စည်းစနစ်ကျသော ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒီ" အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကာ "လက်ဖက်ရည်ဝိုင်း လှုပ်ရှားမှု" (Tea Party movement) မှုကို ထောက်ခံသူဖြစ်ပြီး ထိုအဖွဲ့၌"၎င်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒီနှင့် ရစ်ပါဘလစ်ကန်တစ်ဦး ဖြစ်သည်" ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ဇူလိုင်တွင် အင်ဒီယာနာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး စည်းရုံးလှုံဆော်မှုကို ရပ်နားကာ ထိုစဉ်က ရစ်ပါဘလစ်ကန် သမ္မတလောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ရွေးချယ်လိုက်သော ဒုတိယသမ္မတလောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဒုတိယ သမ္မတအဖြစ် စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
↑ Next VP: 10 things to know about Indiana Gov. Mike Pence။ IndyStar (November 9, 2016)။
↑ Former Indiana Governors။
↑ Groppe၊ Maureen။ "U.S. Rep. Mike Pence of Indiana to get House GOP's No.3leadership job"၊ November 19, 2008။
↑ Hulse၊ Carl။ "Mike Pence Emerging asaCommanding Figure in Trump Administration"၊ November 11, 2016။
↑ "5 faith facts on "Mike Pence: A 'born-again, evangelical Catholic"၊ July 15, 2016။ Also published the same date in the National Catholic Reporter.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုက်ပန့်စ်&oldid=672227" မှ ရယူရန်
၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။